Kubudirira: Iyo "Inotsanya, Yakachipa, Yakanaka" Rubrik
Mugovera, Chivabvu 29, 2010 Svondo, October 4, 2015 Robby Kuurayiwa
Chero bedzi paine mamaneja eprojekiti, pakave nekukurumidza-uye-tsvina tsvina yekutsanangura chero chirongwa. Unodaidzwa kuti mutemo we "Kurumidza-Kudhura-Kwakanaka", uye zvinokutora iwe masekondi mashanu kuti unzwisise. Heino mutemo: Kurumidza, zvakachipa kana zvakanaka: Sarudza chero maviri. Chinangwa chemutemo uyu ndechekutiyeuchidza kuti zvese zvakaoma kuita zvinoda tradeoffs. Chero nguva patinowana pfuma mune imwe nharaunda pasina mubvunzo kuchave nekurasikirwa kune imwe nzvimbo. Saka